Digg တိုးတက်ရန်အကြံပြုချက် ၁၀ ခု Martech Zone
Digg တိုးတက်ရန်အကြံပြုချက်များ ၁၀
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 22, 2006 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 Douglas Karr
ပင်မစာမျက်နှာသည်ကျွန်ုပ်အားပစ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့လူမှုမီဒီယာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Digg စာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်း၏မကြာသေးမီက Digg များ၊ ကျွန်ုပ်၏မကြာသေးမီ diggs များနှင့်ကျွန်ုပ်ထည့်နိုင်သောအခြားအကြောင်းအရာနေရာများ (အမျိုးအစားအလိုက်) ရှိသင့်သည်။
“ Digg အားလုံးအကြောင်းပါ။ ” နေရာလွတ်ဖြစ်သည်။ မီနူးကိုဖွင့်ပါ။ Digg ဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါသိချင်ရင် link အကြောင်းထည့်ပါ။ သင်အလွန်အဖိုးတန်အိမ်ခြံမြေတက်ယူပါတယ်။
Pro / Con မှတ်ချက်များ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်မည်သူကအကောင်းဆုံးထင်မြင်ချက်ရှိပြီးမည်သူသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုကြည့်လိုသည်။ ပtheိပက္ခစတင်ကြပါစို့။ အဆုံးမဲ့မှတ်ချက်များသည်အသုံးမဝင်ပါ။
ဘယ်မှာအဆင့်သတ်မှတ်ရမလဲ ငါဟာတူးသူကြီးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။ ထိပ်ဆုံးတူးဖော်သူ ၁၀ ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲ။
ကြီးမားသော Diggnation Podcast အလံကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ Sheesh …ကောင်းမွန်တဲ့စပီကာလေးက Podcast ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်မိမှာပါ။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသော Diggs တွင်စကားပြောကောင်းပြောနိုင်သည်။ ရပ်ရွာကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဆွဲထုတ်ပါ။
Tags, tags, tags ။ သင့်ရဲ့အမျိုးအစားများကိုစို့။ သူတို့တကယ်လုပ်တယ် လူတွေကသူတို့ရဲ့ entries တွေကို tag လုပ်ခွင့်မပြုပါနဲ့။ ဥပမာအားဖြင့်“ CSS” ကိုငါရယူနိူင်တယ်။
လာမည့်ပုံပြင်များ? Fast Moving Stories ကောဘယ်လိုလဲ။ ငါခြေဆွံ့လာမည့်ပုံပြင်ကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ အကယ်၍ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း Digg ၁၀ ခုရှိပါကအဘယ်ကြောင့်အရှိန်မြှင့်တင်မည်နည်း။
API? ငါ Dugg သို့မဟုတ်ငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တင်ပြသောပုံပြင်များ add နိုင်အလိုရှိ၏။ RSS ကိုအတော်လေးကန့်သတ်ထားသည် ... ဒါပေမယ့်တစ်ခု API ကို applications များလုပ်ဖို့ငါ့ကို enable လိမ့်မယ်။
Digg သတိပေးချက်များ။ ငါ့သူငယ်ချင်း Digg ကဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လာရင်ငါဘယ်လိုသတိပေးမှုမရတာလဲ။
Permalink ဆိုတာဘာလဲ။ Trackback? ပက်ကျိကို post? ပင်း?
22:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 47 မှာ
အချက် 8: လုံးဝသဘောတူသည်။ တစ်နေ့တာလုံး Digg ပင်မစာမျက်နှာတွင် တူညီသောဇာတ်လမ်းများကို မြင်တွေ့ရသည်ထက် ပိုဆိုးသည်မှာ လာမည့်စာမျက်နှာတွင် အလယ်အလတ်/ကြောက်စရာကောင်းသော/ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောဇာတ်လမ်းများကို မြင်တွေ့ရသည်။
စက်တင်ဘာ 23, 2006 မှာ 4: 22 AM
အမှတ် (၇) က တကယ်ကို စိတ်ရှုပ်စရာပါ။ ၎င်းတို့၏ အမျိုးအစားများသည် အလွန်ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် အမျိုးအစားများမရှိခြင်းကြောင့် Offbeat News တွင် အကြောင်းအရာအချို့ကို ထည့်ထားခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာလ 15 ရက် 2006 ခုနှစ် ညနေ 4:46 နာရီ
နောင်လာမည့်ဇာတ်လမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသစ်ထွက်ရှိမည့်အစား လူကြိုက်အများဆုံး ဇာတ်လမ်းများကို အမျိုးအစားခွဲနိုင်သည်။ အဲဒါက အဲဒီအချိန်မှာ အကျော်ကြားဆုံး ဖြစ်လာမယ့် သတင်းတွေကို ကြည့်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
အဲဒါက အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 🙂
11:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 4, 26 တွင်
​မေးပြီး သင်​ရပါမည်​ (#10 နှင့်​ပတ်​သက်​၍)
မတ်လ 16, 2007 မှာ 10: 21 AM
မင်္ဂလာပါ ယောက်ျားလေးတို့ရေ… Digg ထက် အများကြီး ပိုစိတ်ချရပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို လွှင့်တင်ဖို့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ Profigg.com ကို စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ အဲဒါက အလယ်အလတ်နဲ့ အသေးလေးတွေ မြင်သာမြင်သာရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြော်ငြာဖို့ အထူးသဖြင့် အလယ်အလတ်နဲ့ အသေးစားတွေကို ကူညီပေးမယ့် ပရောဂျက်အသစ်တစ်ခုပါ။
5:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 04
ငါလုံးဝသဘောတူတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ Digg ပရိုဖိုင်တွင် လင့်ခ်များစွာ တင်ထားသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို တိုးအောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီနည်းလမ်းတွေက အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။